Naqshadeynta Blackmagic ayaa ku dhawaaqday Kaamirada Filimka Blackmagic Pocket-ka cusub ee 6K Pro | NAB Show News | 2020 NAB Show Iskaashatada Warbaahinta iyo Soosaaraha NAB Show LIVE. Warka Injineeriyada ee Warbaahinta
Bogga ugu weyn » News » Naqshadeynta Blackmagic waxay ku dhawaaqeysaa Kaamirada Filimka Blackmagic Pocket-ka cusub ee 6K Pro
Advanced Pocket Cinema Camera 6K oo lagu dhisay filtarrada ND, shaashadda HDR ee la hagaajin karo, sayniska midabka Gen 5, bateriga weyn iyo muuqaalka ikhtiyaariga ah!
Fremont, CA, USA - Arbaco, Febraayo 17, 2021 - Blackmagic Design maanta ayaa lagu dhawaaqay Kaamirada Filimka Blackmagic Pocket 6K Pro, oo ah nooc cusub oo aad u awood badan oo ay ku jiraan astaamo loogu talagalay filim dijitaal ah oo dhamaadka sare ah. Qaabkan cusub waxaa ka mid ah shaashad shaashad ah shaashadda HDR ee shaashadda ah ee loo yaqaan '1,500 nit' oo dhalaalaya, oo lagu dhisay miirayaasha ND, batariga weyn, oo lagu daray taageerada ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ah. Moodelkan waxaa sidoo kale ku jira jiilkii ugu dambeeyay ee sayniska 5 midab leh, Super 35 HDR image sensor oo leh 13 joogsi oo kaladuwan oo firfircoon, laba wadan oo ISO ah oo 25,600 ah iyo muraayad caan ah oo loo yaqaan 'EF lens mount'
Kaamirada Filimka Blackmagic Pocket 6K Pro ayaa isla markiiba laga heli karaa Blackmagic Design iibiyeyaasha caalamka oo dhan $ US $ 2,495.
Naqshadeynta xarrago leh ee Kaamirada Filimka Blackmagic Pocket-ka ayaa xirxirtay tiro aan caadi aheyn oo muuqaalada filinka dhijitaalka ah ee dhammaadka leh loogu talagalay naqshad yar, naqshad gacmeed. Kaamerada ka sameysan culeyska miisaanka yar ee kaarboonka polycarbonate ee isku dhafan, kaamirada ayaa leh gacan qabad badan oo badan oo leh dhamaan kontoroolada wax lagu duubo, ISO, WB iyo xagasha saxda ee faraha. Sababtoo ah waa kamarad casri ah oo filim dijitaal ah, dareeraha waxaa loogu talagalay in lagu yareeyo buuqa kuleylka u oggolaanaya hooska nadiifka iyo sare ee ISO. Ku darso LCD 5 inch ah oo weyn ayaa suurtogal ka dhigeysa in si buuxda diirada loo saaro qaraarada 4K iyo 6K.
Muujinta dareeraha weyn ee '6144 x 3456 Super 35' iyo 'lens lens mount', Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K waxay u oggolaanaysaa macaamiisha inay isticmaalaan muraayadaha indhaha ee waaweyn ee loo yaqaan 'EF' lenses si ay u abuuraan sawirro filimo leh qoto dheer oo hoose, taas oo u oggolaanaysa sooyaal la isku halleyn karo iyo waxyaabo qurux badan oo bokeh ah.
Kaamirada Filimka Blackmagic Pocket 6K Pro waxaa ku jira astaamo pro oo dheeri ah sida lagu dhisay miirayaasha 2, 4 iyo 6 ee joojiya ND, leexashada la janjeeri karo HDR LCD oo leh nits 1500 dhalaalaya oo ku habboon isticmaalka qorraxda dhalaalaysa Waxa kale oo ku jira laba gal-gal oo maqal ah oo mini XLR ah iyo batari weyn oo nooca NP-F570 ah.
Hadday adeegsadayaashu wax ku tooganayaan iftiinka qoraxda ee dhalaalaya ama aan haba yaraatee wax iftiin ah lahayn, 13-ka joogsi ee kala duwanaanta firfircoonida ah ee leh labada hooyo ee ISO illaa 25,600 waxay bixiyaan sawirro buuq oo aad u hooseeya dhammaan xaaladaha nalalka. Ku darso moodooyinka 6K waxay wataan dareemayaal Super 35 weyn ah oo u oggolaanaya toogashada qoto dheer ee hoose iyo lenses anamorphic. Dhammaan moodooyinka waxay u oggolaadaan macaamiisha inay toogtaan illaa 60 fps xallinta buuxda ama 120 fps daaqad ahaan. Dareere cajiib ah oo lagu daray sayniska midabka Blackmagic macnaheedu waa macaamiisha waxay helayaan tikniyoolajiyad isku mid ah tan kamaradaha filimka dhijitaalka ah ee ugu qaalisan.
Moodooyinka 6K waxay soo bandhigaan muraayad indho-indheyn ah 'EF lens mount' si macaamiisha ay u isticmaali karaan macaamiisha muraayadaha indhaha ee horeyba uga haystay kamaradaha kale sida DSLR, URSA Mini Pro ama xitaa asalka asalka ah Blackmagic Cinema Camera. Macaamiisha ayaa isticmaali kara muraayadaha indhaha ee badanaa la heli karo kuwaas oo bixiya xulasho hal abuur leh iyo muuqaal muuqaal tayo sare leh oo tayo leh. Muraayadda muraayadaha firfircoon waxay u oggolaaneysaa macaamiisha inay hagaajiyaan diiradda iyo iris-ka badhanka kamaradda ama shaashadda taabashada.
Kaamirada Filimka Blackmagic Pocket 6K Pro waxay leedahay tayo sare, miirayaasha IR ND oo mootooyin u oggolaanaya macaamiisha inay si dhakhso leh u yareeyaan xaddiga iftiinka galaya kamaradda. Loogu talagalay in lagu waafajiyo midabaynta iyo sayniska midabka ee kamaradda, miirayaasha 2, 4 iyo 6 ee joogsada ayaa macaamiisha siiya latitude dheeraad ah xitaa marka ay ku jiraan laydh xun. Miirayaasha IR-ga ayaa loogu talagalay in lagu sifeeyo dhererka indhaha iyo dhererka labadaba si siman, iyaga oo tirtiraya wasakhda IR ee sawirrada. Badhamada hawlgalku waxay ku yaalliin xagga dambe ee jirka kamaradda, oo la dhigayo meel fudud oo ay suulka ka gaari karaan gacanta gacanta badan. Dejiyeyaasha shaandheeye ee la xulan karo ayaa xitaa loo soo bandhigi karaa inay yihiin lambar ND ah, joojinta dhimista ama jajabka LCD-ka.
Kaamirooyinka Pocket Cinema waxay ka kooban yihiin laba ilmood oo ISO ah illaa 25,600, taas oo macnaheedu yahay inay ku habboon yihiin inay yareeyaan hadhuudhka ama buuqa sawirada, iyagoo ilaalinaya kala duwanaanta firfircoon ee dareemayaasha. ISO-ga asalka ah ee 400 waa mid ku habboon muuqaalka leh nalalka la dejiyo. Faa'iidada waxaa loo dejiyaa si otomaatig ah sida macaamiisha ay u hagaajinayaan dejinta ISO, sidaa darteed way fududahay in la soo qaado sawirro waaweyn marka macaamiishu aysan haysan waqti ay ku dhigaan nalalka.
Duubista Kaamirada Filimka Blackmagic Pocket iyadoo la adeegsanayo qaabab fayl furan oo furan sidaa darteed macaamiisha uma baahna inay ku lumiyaan waqtiga gudbinta warbaahinta. Duubista waxay ka shaqeysaa heerka warshadaha heerka 10-bit Apple ProRes faylalka dhamaan qaababka ilaa 4K ama 12-bit Blackmagic RAW dhammaan qaababka illaa 6K. Horumariyayaashu way soo dejisan karaan oo isticmaali karaan bilaashka Blackmagic RAW SDK si loogu daro taageerada barnaamijyadooda. Kuwa ugufiican dhamaan faylasha warbaahinta waxay kudhex shaqeeyaan dhamaan nidaamyada hawlgalka oo lagu daray macaamiisha way qaabeyn karaan kaararka warbaahinta iyo saxamada HFS + ee Mac iyo ExFAT ee Windows.
Kaamirada Filimka Blackmagic Pocket-ka waxay ka kooban tahay shaashad shaashad ah oo weyn oo 5 inch ah oo dhalaalaysa taas oo u fududaynaysa macaamiisha inay qaabeeyaan tallaalada oo ay si sax ah diiradda u saaraan. On shaashadda shaashadda muujiyaan xaaladda iyo diiwaanka beegyada, histogaraam, tilmaamayaasha sarreysa diirada, heerarka, hagayaasha jir iyo in ka badan. Kaamirada Pocket Cinema 6K Pro LCD waa muuqaal horumarsan oo HDR ah oo kor iyo hoos u foorari karaya sidaa darteed way fududahay in lala socdo tallaalkooda meel kasta. Ku darso muuqaalka '6K Pro' ee 'HDR' wuxuu soo bandhigayaa 1500 nits oo dhalaal ah, oo ku habboon in loogu isticmaalo iftiinka qoraxda.
Ku soo bandhigida isla jiil 5 midab saynis ah sida dhamaadka sare URSA Mini Pro 12K, Pocket Cinema Camera 6K Pro waxay ku siineysaa xitaa horumar weyn tayada tayada leh muuqaal qurux badan, maqaar sax ah iyo midab aamin ah tallaal kasta. Macaamiisha waxay helayaan 12-bit gamma qalooca cusub oo firfircoon oo loogu talagalay in lagu soo qabto xog badan oo midab leh oo ku saabsan muuqaalka iyo hooska, si aad u eegto sawirro fiican. Sayniska midabku sidoo kale wuxuu qabtaa qaar ka mid ah farsamaynta muuqaalka adag ee Blackmagic RAW, sidaa darteed midabka iyo xogta kaladuwan ee firfircoon ee ka imanaya dareeraha ayaa lagu keydinayaa metadata macaamiisha ay u isticmaali karaan wax soo saarka boostada.
Kaamirada Pocket Cinema 6K Pro waxay taageertaa muujiye ikhtiyaari ikhtiyaari ah oo banaanka lagu sameeyo iyo toogashada gacanta oo sax ah oo sahlan. Macaamiisha waxay helayaan tayo sare leh oo isku dhafan oo ah 1280 x 960 midab OLED ah oo lagu dhisay dareeraha dhawaanshaha, 4 curiyaha dhalada dhalada ah oo loogu talagalay saxsanaanta cajiibka ah ee leh balaadh -4 + +4 hagaajinta diirada. A ku dhisan jaantuska diirada dijitaalku wuxuu hubiyaa macaamiisha inay helaan qaab-dhismeedka diiradda sare ee muuqaalka. Macaamiisha waxay sidoo kale eegi karaan macluumaadka heerka muhiimka ah sida hagayaasha qaabeynta. Kaamirada Pocket Cinema Pro EVF waxay si dhakhso leh ugu xiraysaa Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K Pro iyada oo loo marayo hal isku xira. Aragtiyaha daawaduhu wuxuu leeyahay heer wareeg ah oo heerka 70 ah wuxuuna la yimaadaa 4 nooc oo kala duwan oo ah indho-fiiqis indhaha labada bidix iyo midig ah.
Kaamirooyinka Filimada Blackmagic Pocket-ka ayaa soo bandhigaya wax yar oo XLR ah oo leh 48 volts oo awood leh oo loogu talagalay isku xidhka makarafoonada xirfadleyda ah sida lapel mics iyo booms. Qaabka 6K Pro wuxuu ka kooban yahay 2 mini XLR xidhiidhada, oo macaamiisha u oggolaanaya inay duubtaan 2 waddo oo maqal ah oo kala duwan iyagoo isticmaalaya 2 mics, iyadoon lahayn wax isku qas ah oo dibadda ah Afarta loo dhisay mics-ka waxay leeyihiin sagxad aad u hooseysa oo qaylo leh oo waa kuwo naxdin leh oo dabaysha u adkaysta, waxay ku qabtaan dhawaq weyn meel kasta. Waxa kale oo jira aqbasho cod ah oo dhan 3.5mm oo loogu talagalay isku xidhka makarafoonada fiidiyaha fiidiyaha ah, oo ay weheliso dhisme ku jira af-hayeen loogu talagalay dib-u-ciyaaris iyo aaladda dhegaha ee 3.5mm.
Kaamirada Filimka Blackmagic Pocket 4K iyo 6K waxay isticmaalaan baytariyada nooca LP-E6 ee laga saari karo halka qaabka 6K Pro uu adeegsado baytariyada NP-F570 ee waaweyn. Isku xiraha qufulka korantada ee DC ayaa loo adeegsadaa si macaamiisha aysan uga walwalin luminta awoodda inta ay socoto toogashada. Ku darso xirmada korontada ku jirta ee 'AC plug pack' ayaa awood u yeelan kara kaamerada isla markaana isla markiiba ka qaadi kara batteriga. Xitaa dekedda balaadhinta ee USB-C ayaa khiyaanayn karta batteriga, sidaa darteed macaamiisha ayaa isticmaali kara baakado batariyaal la qaadan karo, xeedho taleefanka gacanta ama laptops. Qabashada ikhtiyaariga ikhtiyaariga ah waxay u oggolaanaysaa macaamiisha inay ku daraan baytariyaal dheeri ah si ay si weyn ugu dheereeyaan awoodda kamaradda si ay macaamiisha u sii haysan karaan toogashada maalinta oo dhan.
Dhammaan moodooyinka Kaamirada Pocket Cinema waxaa ku jira nooc buuxa oo ah DaVinci Resolve Studio, kaas oo ah isla software loo isticmaalo Hollywood sameynta filimada muuqaalka dhamaadka sare, bandhigyada telefishinka episodic, xayeysiisyada iyo waxyaabo kale oo badan. DaVinci Resolve wuxuu soo bandhigayaa bogga cusub ee jarista oo leh qalab tafatir caqli iyo astaamo cusub oo cusub oo loogu talagalay inay ka caawiso macaamiisha inay si dhakhso leh u helaan muuqaalada ay doonayaan macaamiisha, si wadajir ah u saxeexaan una soo saaraan si dhakhso leh Marka lagu daro bogga cusub ee la jaray, macaamiisha sidoo kale waxay helayaan DaVinci halyeeyga xirfadeed, hagaajinta midabka horumarsan, maqalka maqalka iyo aaladaha saamaynta muuqaalka, dhammaantoodna ku jira hal barnaamij oo softiweer ah.
"Marka la eego Poem Cinema Camera 6K Pro, waxaan dooneynay inaan ku darno dhamaan astaamaha dhamaadka sare ee kaamirooyinka filimka dhijitaalka ah ee loo yaqaan 'Pocket Cinema Camera design'," ayuu yiri Grant Petty, Blackmagic Design Agaasime guud. “Tani waxay ka dhigan tahay inaad heshay xal filim dijitaal ah oo aad u yar oo la qaadi karo laakiin leh dhammaan astaamaha horumarsan sida filtarrada cajiibka ah ee ND, muraayad ikhtiyaar ikhtiyaari ah iyo shaashad HDR oo dhalaalaysa. Waxaan u maleyneynaa dijitaalkeena filim macaamiisha way jeclaan doonaan!
Kaamirada Filimka Blackmagic Pocket 6K Pro Features
Waxaa naqshadeeyay ka samaysan walxaha kaarboon 2-aad ee kaarboon-oksaydh ah.
Qalabka dareeraha ah ee 6144 x 3456 oo leh 13 istaag iyo ISO laba dhalasho ah illaa 25,600.
La jaan qaadi kara noocyo badan oo muraayadaha indhaha oo caan ah.
Lagu dhisay matoorrada 2, 4 iyo 6 ee joojiya miirayaasha ND.
Ilaa 25,600 ISO oo loogu talagalay waxqabadka iftiinka hooseeya ee cajiibka ah.
Foomamka faylka furan ee caadiga ahi waxay la jaan qaadayaan barnaamijyada caanka ah.
La hagaajin karo, HDR 1500 nit LCD shaashadda.
Waxaa ku jira Blackmagic Generation 5 Science Science.
Ikhtiyaar ikhtiyaari ah Blackmagic Pocket Cinema Camera Pro EVF.
Wax-soo-saarka XLR-ga mihnadeed ee leh 48 volt power phantom.
Batariga weyn ee NP-F570, ikhtiyaar ikhtiyaari ah Blackmagic Pocket Camera Battery Pro Grip.
Waxay kujirtaa DaVinci Resolve Studio oo buuxa oo loogu talagalay soosaarista boostada.
Sawirka Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K Pro ayaa hada loo heli karaa US $ 2,495, marka laga reebo waajibaadka maxaliga ah iyo canshuuraha, laga bilaabo Blackmagic Design iibiyayaal caalami ah.
Sawirada wax soo saarka ee Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K Pro, iyo sidoo kale dhamaan kuwa kale Blackmagic Design alaabada, ayaa laga heli karaa www.blackmagicdesign.com/media/images.
Blackmagic Design Kaamirada Filimka Pocket 6K Pro 2021-02-17
Previous: RSP's Huan Luong wuxuu ka caawiyaa diyaarinta farshaxanada VFX ee mustaqbalka
Next: Naqshadeynta Blackmagic waxay ku dhawaaqeysaa Soo Bandhige Websaydh Cusub Blackmagic HD